ကိုယ်ပိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်သောအသေးစားပေါင်းစပ်ထားသောဂျုံရိတ်စက်သည်ဘက်စုံသုံးပေါင်းစပ်ထားသောဂျုံရိတ်စက်ဖြစ်သည်, ၎င်းသည်အသေးစားဆန်နှင့်ဂျုံရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်အဓိကသင့်လျော်သည်. စပါးရိတ်သည်, ခြွေလှေ့ခြင်း, ခွာနေ, ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းသို့လှုနှင့်ထုပ်ပိုး. ၎င်းသည်လယ်သမားများအားအကြီးအကျယ်ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းမှသက်သာစေသည်. ထို့အပြင်ဖောက်သည်များနှင့်ကုန်သည်များသည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုကြောင့်၎င်းကိုကောင်းစွာလက်ခံကြသည်,ကိုယ်ပိုင် propelled ဂျုံရိတ်သိမ်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စစ်ဆင်ရေးနှင့်လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်သောဂျုံရိတ်စက်ကိုလေးနှစ်ကြာသုတေသနနှင့်တိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်, ထို့အပြင်ရာနှင့်ချီသောကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများသည်ယခင်မော်ဒယ်များ၏အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်, ရှုပ်ထွေးသောရိတ်သိမ်းနိုင်ခြင်း, ကောက်ပဲသီးနှံများတည်းခိုခန်း, နှင့်ရိတ်သိမ်း. ၎င်းသည်တောင်သူလယ်သမားများ၏အခက်အခဲများကိုနှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ ဖြေရှင်းခဲ့သည်, ချွေးနှင့်ရွှံ့, ထို့အပြင်လယ်သမားများသည် ၀ င်ငွေရရန်နှင့်ငွေရရန်အတွက်စက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဓာတ်ဆီဂျုံရိတ်သိမ်းမြေကွက်ငယ်များအတွက်သင့်လျော်သည်, တောင်များ, တောင်များနှင့် sorgum ရိတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, stevia, ပညာရှိ, ကျောက်တံတား, Oats, ဖုန်, နှင့်ရိတ်သိမ်း: ဇီ, prunella, ဂျုံ, ပဲပုပ်စပါး, မုဒိမ်းမှု, ပိုက်ဆန်, မြက်ပင်, နှင့်အခြားကောက်ပဲသီးနှံများ.
* တောင်တန်းဒေသများအတွက်သက်ဆိုင်သည်, တောင်တန်းမြေ, စပါးခင်း, ကျန်ကြွင်းသောလယ်ပြင်နှင့်ရွှံ့လယ်ပြင်, အထွေထွေစပါးရိတ်ရာကာလ၌မဝင်ရရှိရာ.
* အလိုအလျောက်, ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်ထားသောကိုယ်တိုင်ပါသောရိတ်သိမ်းစက်, အသေးစားဆန်နှင့်ဂျုံရိတ်သိမ်းရန်သင့်တော်သည်.
* စပါးခင်းများအတွက်အထူးဘီး, ရွှံ့အနက် ၃၀ စင်တီမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်.